Mara maka akụrụngwa aphrodisiac ya, ginger na - eme ka mgbatị ahụ dịkwuo mma - AFRIKHEPRI
Na-ekiri njem Ụmụaka (2018)
nke ubochi izu ike, ka abali abuo n’afọ 30
Lọ ginger kacha mara amara maka aphrodisiac mmetụta ya na ike nke ịkpalite mmekọahụ. Mana omume ọma a abụghị naanị otu. Igwe ji nwayọ nwere ọtụtụ eriri ụta ya. Mma nri, akụrụngwa na-agba abụba. Otu n'ime omume ọma nke ginger bụ nke kachasị echebara mgbaze.
N'ezie, dị ka ụfọdụ nnyocha si kwuo, mgbọrọgwụ ahụ nwere ihe ndị na-enyere aka na-eme ngwa ngwa. Ihe ọzọ bụ na osisi ahụ na-eme ka mmadụ nwee afọ ojuju na onye na-eri ya mgbe niile. O nwekwara ihe onwunwe na-egbu ọkụ, na-atụ aro maka ụfọdụ ịdị ọcha.
Nnyocha mmụta sayensị egosila na ginger na-enyere aka na-eri ahịhịa ogwu na-edozi ahụ, na-emepụta abụba ma na-egbochi ma ọ bụ na-egbochi tract digestive. Na 1999, Òtù Na-ahụ Maka Ahụ Ike Ụwa achọpụtawo uru nke rhizome ginger iji lụsoo ọgbụgbọ na vomiting nke afọ ime.
N'ezie, ndị gingerols na shogaols ndị dị na osisi ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na mmetụta antiemetic, karịsịa site na ime ihe iji belata mmegharị nke afo. Ya mere, mgbọrọgwụ ahụ nwere ike iji dochie anya vitamin B6 n'ogologo maka ụmụ nwanyị dị ime. Ginger nwekwara ihe bara uru nke na-eme ihe na-emenye ihere. Karịsịa maka ndị na-achọ ibu ibu, na-enweghị nri draconian ma na-enweghị mmetụta ndị ọzọ. A na-atụ aro ya karịsịa maka ịbelata afọ, nke mmịnye ma ọ bụ mgbaze mgbaze na-emetụtakarị.
Ọ na-enyekwa aka belata ahụ ọkụ, ọgụ mgbu ma nwere antibacterial na antiviral Njirimara. Ọ bụkwa n'elu ihe niile na-enye ume na ume nke ahụ. Ọzọkwa, àgwà ya nke aphrodisiac sitere na ikike nke ụda ahụ dum.
Eji ginger laghachi azụ karịa afọ 5000. Ọ bụ otu n'ime osisi ndị a kacha jiri mee ihe na Indian Ayurvedic ọgwụ. A na-ejikwa ya agwọ ọgwụ, a na-atụ aro ginger maka nchekasị digestive, enweghị ume, ike ma ọ bụ ịlụ ọgụ dị iche iche.
Taa, osisi ahụ bụ ihe gbasara ọmụmụ ihe karịsịa maka àgwà ọma cancer. Ginger, isi iyi nke mineral na vitamin
Ginger nwere ọgaranya na mineral. Ọ nwere manganese, phosphorus na magnesium. Ma calcium, sodium na ígwè. Ọ bụkwa nke ọma nke vitamin, ebe o nwere vitamin B1, B2 na karịsịa vitamin B3. Nlekọta ohuru, nke di ugbu a, nwere vitamin C, ma ozugbo akpọnwụ, vitamin a apụ n'anya.
N'ikpeazu, rhizome nke ginger (ihe dị n'ime ala nke steam) bara ọgaranya na starch. Ọ nwekwara mmanụ dị mkpa ya, ma ọ bụ lipids, protein na carbohydrates. Inye ginger mgbe nile bara uru maka ahuike gi. Na karịsịa, ọ bụrụ na ị na-ejikọ ya na ndị ọzọ ngwa nri dị ka turmeric na pawuda.
Esi ewepu ginger?
Ihe kacha mma bụ iji 2 5 grams nke ginger rhizome (nke a mịrị amị,) kewara 2 ma ọ bụ 3 ugboro n'ụbọchị.
Ma ị nwekwara ike iri ya dịka tii tii, nne tincture, ihe ọṅụṅụ ike ma ọ bụ grated.
Jinja weputara 600mg - mgbatị dị elu 20: 1 - Ginger root - adabara ndị na-eri anụ - mbadamba 90 (mbadamba ọnwa atọ) site na mbara ụwa.
dị ka Mee 30, 2020 1:40
HURER & & NATII! Gburugburu Ginger dum, Akọrọ na Powdered. Na-eri dị ka akụkụ nke nri edozi.
✅ IWU! Mbadamba ihe aka nke kachasi ike n’ahịa.
B INR THE EU! A na-eme ginger na EU ka ụkpụrụ kacha mma. Ọ dabere na njikwa njikwa siri ike na njikwa na-aga n'ihu site na nyocha nnwale nke nnwere onwe. Anyị na-enye nkwa azụmaahịa 100% ma ọ bụrụ na ndị ahịa anyị enweghị afọ ojuju, yabụ na ọ bara uru ịnwale.
GURN B WHR E ANY E EGO NA-EGO? Kemgbe afọ 8, ụwa emebela ihe dị elu maka ihe ọhụrụ. Anyị na-agbatịpụ akụkụ anyị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa izu ma na-enye gị nri nri na ọnụahịa Kacha mma maka ego.
Isi Iyi: http://www.consoglobe.com/bienfaits-insoupconnes-du-gingembre-cg
Ụdị dị mma nke pọọpọ
Akwụkwọ ose Cayenne na-egbochi kansa ma nwee ike ịkwụsị obi ọgụ n'otu minit
2025, mgbanwe na ala nke Kama
Universewa ahụ mebiri emebi ma ọ bụ echiche nke ịdị n'otu